Yesuus (Iyyasuus) Archives - Ibsaa Jireenyaa
Category: Yesuus (Iyyasuus)
Yesuus ykn Iisaan (nageenyi isarratti haa jiraatu) nabiyyii kabajama Islaamaa keessatti bakka guddaa qabuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta’aalaa Dandeetti Isaa ifa baasuuf namoota haala afuriin uume. 1ffaa- Nabiii Aadamiin abbaa fi haadha malee biyyee irraa uume. 2ffaa-Hawwaa dubartii malee dhiira qofarraa uume.3ffaa- Ilmaan Aadam immoo haadhaa fi abbaa irraa uume. 4ffaa- dhiira malee Iisaa dubartii qofa irraa uume. Kanaafu, Nabii Iisaan dubarti qofa irraa uumamuun gooftaa ykn ilma gooftaa isa hin taasisu. Rabbiin subhaanahu wa ta’aalaa ni jedha:
Akkuma Rabbiin Aadamiin haadha abbaa malee uumee, Iisaas abbaa malee uumuu irratti danda’aadha. Kan nama abbaa fi haadha malee uumee akkamitti abbaa malee nama uumuu dadhabaa? Akkuma Aadamin biyyee irraa ta’i jechuun uumee, Nabii Iisaas ta’i jechuun uumee.
June 20, 2020 Sammubani Leave a comment
Gaafi, “Iyyasuusi fi haadha isaa waaqefachuun sirriidhaa??” jedhu osoo ilaallu kunoo xumura irra geenye. Yeroon gaafi kanaaf deebiin jala muraa itti deebisnu amma. Mee osoo haqa irraa hin jallatinii fi namoota hin arrabsin dhugaa taane gaafi kanaaf deebii sirrii haa kenninu. Jalqaba namni wanta tokko kan waaqeffatuuf faayda irraa argachuuf ykn miidhaa akka isarraa deebisu barbaadeti. Akkasi miti ree? Kan waaqeffatan faayda namaaf kennuu fi miidhaa namarraa deebisuuf amaloota akkami qabaachu qabaa? Dhugumatti, jiraataa, beekaa, dhagaya, argaa fi danda’aa ta’uu qaba. Kan waaqefatamu jiraataa yoo hin ta’in du’aa irraa wanta barbaadan argachuun danda’amaa? Kan waaqefatamu haala fi rakkoo namaa kan beeku, argu, dhagayuu yoo hin ta’in, wanta barbaadan irraa argachuun danda’amaa? Kan waaqeffatan wanta hunda irratti danda’aa yoo hin ta’in faayda namaaf kennu ykn miidhaa namarraa deebisu danda’aa? Fkn, rooba roobsu irratti danda’aa yoo hin ta’in soorata barbaadan namaaf kennu danda’aa?